HEERKULKA MASKAXDA: WAA MAXAY MABDA'A HAWLGALKA, SHURUUDAHA XULASHADA - KUFSI
Ujeedada ugu weyn ee qalabka
Qalabka kuleyliyaha - qalab kaas oo aad si toos ah u bedeli karto heerkulka la rabo, iyo sidoo kale qoyaan leh caawimo gaar ah ee dareemayaasha gaarka ah iyo walxaha kululaynta. Qalabka noocan oo kale ah wuxuu kormeeraa kala duwanaanshaha deegaanka iyo inuu magdhowo.
Qeybaha hawada kuleylka ee kuleylaha
Heerkulbeeg kasta wuxuu ka kooban yahay qeybaha soo socda:
Heerkulbeegga (hydrometer) - wuxuu muujiyaa heerka heerkulka cimilada wuxuuna u gudbiyaa unugta ugu muhiimsan. Mararka qaar waxa ay ku jirtaa qeybta ugu muhiimsan.
Ma taqaanaa? Nooc kasta oo shimbir ah, kuwaas oo loogu talagalay horumarinta embriyaha, heerkul gaar ah ayaa loo baahan yahay. Tusaale ahaan, digaagga - 37.7 digrii.
Qaybta ugu muhiimsan waxay ku xiran tahay nooca qalabka. Xuduudaha loo baahan yahay ayaa lagu dhigaa, waxaana la isticmaalaa xaddiga, taas oo markaa la soo saaro walxaha kuleylka.
Qalabka kululaynta waa qalab loogu talogalay badalidda tamarta korantada. Inta badan fursadaha dhaqaale ee kuleylka loo isticmaalo nalalka, taas oo si sahlan loo hagaajin karo, marka laga reebo, waa kuwo adag. Qaababka qaaliga ah kuleylka kuleylka kuleylka ayaa loo isticmaalaa
Waa muhiim! Qaadista ukumaha leh naqshad waa wax aad u adag oo waqti-qaadasho ah. Mararka qaarkood, xitaa khalad yar, waxba ma dhicin, dhammaan embriyaha waxay u dhintaan ka hor intaan la qabsan.
Noocyada ugu waaweyn ee qalabka
Inkasta oo xaqiiqda ah in dhammaan kuleyliyeyaasha la siiyay iibka, si adag u shaqeeyaan, waxaa jira sifooyin gaar ah, marka la eego inaad u baahan tahay inaad doorato habka saxda ah.
Waa muhiim! Marka la samaynayo doorasho ka dhaxaysa digital iyo analogue, waa inuu tixgeliyaa tayada korantada ee aagga loo isticmaalo, kororka korantada ee ka dhaca meelaha miyiga ah si dhaqso ah ayuu u dhaawacayaa qalabka.
Qalabka oo dhan ayaa loo qaybiyaa noocyada soo socda:
Heerkulbeerka digital ee loo yaqaan "incubator". Waa mid la isku halleyn karo, oo ay u badan tahay in la jebiyo oo uu yeesho akhrinta qiyaasta saxda ah. Kharashkoodu waa ka sarreeyaa, laakiin shaqooyin badan ayaa ka badan qaab kale.
Mechanical. Waxay haysan kartaa hal nidaam oo heerkul ah, iyo xakamaynta, meeleynta dheeriga ee heerkulbeegga ayaa loo baahan yahay.
Analog (elektarooni). Duufiyeyaasha caadiga ah ee haysta hawlgal heer sare ah.
Mabda'a hawlgalka qalabka
Iyada oo ku xiran naqshadeynta, shaqadu way kala duwan tahay iyadoo la raacayo mabda'a ficilka. Duufaha korontada si toos ah ayaa loo ilaaliyaa heerkulka hore, inta lagu guda jiro isbeddelka, walaxda kuleylku waxay bilaabmaysaa inay shaqeyso marka la yareeyo oo la demiyo kaddib marka la dhaafo xadka loo dhigay.
Soo ogow in ay suurtogal tahay in la sameeyo heerkulbeegga masiibada.
Qaybta ugu muhiimsan ee heerkulbeegga korantada waa saxan bimetallic ah, taas oo bedesho tayada jireed iyada oo la raacayo heerkulka kala duwan. Ka dib markii lala xiriirayo dhexdhexaadinta kuleylka ama walxaha, taargooyo sida kumbuyuutarka ah ayaa kontaroolaya qalabka kululeeyaha Marka heerkulka hooseeyo, saxanka waa la bedelay, taas oo keenaysa xidhitaanka xiriirrada korantada iyo socodka tamarta korontada ee qaybta kululaynta. Kadib marka la gaaro heerka heerkulku aadka looga baahan yahay, waxay ku socotaa jihada kale, jebinta xiriirka iyo kala-soocidda korantada. Isticmaalka farsamoyinka qaansareysan, mabda'a hawlgalka wuxuu ku salaysan yahay sifooyinka gaarka ah ee maaddooyinka qaarkood. Marka heerkulku kor u kaco, mugga waxay kordhisaa, iyo hoos u dhac. Inta lagu jiro hawlgalka, heerkulku waa isbeddel joogta ah ee geedi socodka. Qalabka casriga ah ayaa kuu oggolaanaya inaad habaynto habka aad uga jawaabi lahayd xitaa isbedel yar oo heerkulka ah.
Ma taqaanaa? Kulankii ugu horreeyay waxaa loo adeegsaday Masar hore, waxay ahaayeen qolal diirran, foosto ama tuubooyin. Waqtigaas, kaliya wadaaddada oo kantaroola mikroclimate iyadoo la adeegsanayo dareeraha gaarka ah ee adkeynaya heerkul gaar ah ayaa taas samayn kara.
Si aad u hesho natiijada ugu badan ee geedi socodka qashinka ah ee ukunta, waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa la raadinayo markaad dooranayso heerkulbeeg:
Is-beddelka isbeddelka isbeddelka is-beddelka ah iyo sidoo kale is-beddelka heerkulka gudaha.
Ka qayb qaadashada aadanaha ugu yar ee chicks ee taranta.
Awoodda si muuqaal ah loo xakameeyo cimilada guud ee ku jirta wakhti dhan.
Xiridda automatic iyo ka mid noqoshada walxaha kuleylka.
La'aanta kormeer joogto ah iyo hagaajin.
Muuji tusaalooyin caan ah
Inkasta oo doorka weyn ee laga helo suuqa, macaamiisha ayaa inta badan joojiya dareenka soo socda:
Dream-1. Nooca ugu caansan, shaqadoodu waa inay taageerto heerkulka la rabo, xakamaynta qoyaanka, iyo sidoo kale si toos ah u leexinta ukunta. Iibs yar yar waxaa loo isticmaalaa xitaa beeraha yaryar. Faa'iido dheeraad ah waa wax aan qabin xaalad degaan ah iyo isbeddelka isbeddelka ee shabakada korontada.
TCN4S-24R. Qalabka waxaa lagu soo saaraa Koonfurta Kuuriya waxaana lagu qalabeeyaa kormeerka PID. Xaaladda waxaa ku jira dareenka qiyaasta kuleylaha, kaas oo soo bandhigaya dhammaan heerarka la soo sheegay iyo xaaladda dhabta ah ee qalabka. Sababtoo ah xaqiiqda ah in tusmooyinka la diiwaan geliyo daqiiqad kasta, saxnaansho buuxda ayaa la damaanad qaadayaa.
Aries Heerkulbeeggan waxaa loo adeegsadaa aalado kala duwan, marwalba wuu shaqeynayaa. Qalabka waxaa lagu qalabeeyaa saacad isku dhafan oo ka duwan inta soo hartey akhriska sare, sidoo kale, wuxuu ka shaqeyn karaa heerkulka laga bilaabo -20 ilaa +50 digrii. Iyada oo ay sabab u tahay dabeecaddiisa, Aries waxaa loo adeegsanayaa warshado kala duwan.
Cimilada-6. Qalabku wuxuu leeyahay khaladaad aan qancin calaamadaha. Awood u lahaan karta heerkulka cabbirka inta u dhaxaysa 0 illaa 85 digrii oo leh calaamado isku dhafan. Waxay ku xiran tahay shabakad caadi ah, awooda qalabka waa 3 watts
Waxaad xiiseyn doontaa inaad ogaatid sida loo sameeyo qaboojiye ka soo qaboojiye jir ah.
Sida aad u aragto, haddii aad la xidhiidho arrinka baraarugyada taranka oo leh masuuliyad buuxda oo aan lacag udiyaarin si aad u iibsato kulul fiican oo leh heer-kuleyl, markaa waxaa jiri doona natiijo wax ku ool ah.